Waddooyinka Muqdisho Oo loo Xiray Qaban Qaabada Xaflad loo Sameynayo Sanad Guurada Madaxtinimada Farmaajo.
Tuesday February 06, 2018 - 08:27:02 in Wararka by Super Admin
Ciidamo isugu jira AMISOM iyo kuwa dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa xiray inta badan waddooyinka magaalada caasimadda ee Muqdisho.
Jidadka Makka Almukarrama iyo wadnaha ayaa lagu arkayaa ciidamo hubeysan oo gaadiidka dadweynaha udiidaya in ay isticmaalaan.
Inta badan Dadka ayaa saaka cagtooda maalaya waxaana la arkayaa dad badan oo wadar wadar u lugeynaya, Ardayda iskuullada iyo dadka ushaqa taga suuqyada waaweyn ayaa cabashada ugu daran ka muujinaya xirnaashiyaha waddooyinka.
Warar laysla dhaxmarayo ayaa sheegaya in waddooyinka loo xiray qaban qaabada munaasabad uu Farmaajo ugu dabaal degayo sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay markii uu noqday madaxweynaha dowaladda Federaalka.
Munaasabadan ayaa lafilayaa in ay dhacdo maalinta Khamiista oo ku beegan 8 Febaraayo, marwalba oo Madaxda DF-ka ay shirar ku qabsanayaan Muqdisho ayaa waddooyinka laxiraa sababa la xiriira cabsi ay ka qabaan weeraro uga yimaad Shabaabul Mujaahidiin.
Sidoo kale waxaa magaalada Muqdisho ku sugan hoggaamiyaasha maamul goboleedyada oo lafilayo in ay ka qeyb galaan Munaasabadda uu Farmaajo dhiganayo balse waxaa lagu lamaaneeyay shir loogu magac daray 'Amniga Qaranka'.